7 Sano Kaddib Oo Bula Burde Laga Hirgaliyay Idaacad Madax Banaan – Somnews
Xaflad lagu furayay Xarunta labaad ee Radio Hiranweyn ee dagmada bullo-burte ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka dagmada bullo-burde odayaal dhaqameedyo Ururada haweenka dhalin yarada iyo bahda ciyaaraha dagmada bullo-burde ee Gobolka Hiiraan waxana dhamaantood ay siweyn u so dhaweyeen furitaanka xarunta cusub ee radio Hiranweyn.
Agaasimaha Guud ee Radio Hiranweyn Maxamed Cismaan Makaraan oo furitaanka kahadlayayaasheegay in Idaacada ay qeyb ka qaadan doonto in shacabka Bulo-burte uu codkood u gaaro Caalamka si la mid ah sidada daka ku nool Magaaloyinka kale ee dalka.
Gudoomiye kuxigeenka Ururka Haweynaka Bulo-burte Marwo Suukri Saney Muumin ayaa goobta ka sheegtay in shacabka reer bulo-burte ay dhaga la,aayeen Maanta ay heleen meel ka dhageystaan dhacdooyinka gudaha iyo dibada.
Ku simaha ahna gudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyada Liibaan Cabdi Burosow iyo Duqa Dagmada Cismaan Geedi Cilmi ayaa balanqaaday in ay si buuxdo ula shaqeyn doonaan Idaacada hiranweyn oo Manta laga Furay Dagmada Bullo-burte ee Gobolka hiiraan.
Furitaanka Idaacada ayaa noqoneysa Raadiyaha labaad ee dagmada bullo-burte ka shaqeeya iyadoo degmadaasi ay ka howlgasho Radio Muqdisho fareeada Bula burde oo dhowr bilood ka shaqeyneysa halkaasi.